Ahoana ny fomba hanavahana ny fahasamihafana eo amin'ny haingam-pandeha, ny sidina ary ny fiaramanidina - Ikkaro
firosoana >> toetra >> Ahoana ny fomba hanavahana ny fihasamihafana sy ny sidina ary ny fiaramanidina
Azontsika atao ny manavaka azy ireo amin'ny fomba 3 samihafa.
Ara-maso (silhouette sy sidina)
Eto isika dia afaka manavaka lafin-javatra roa hafa: ny morphology an'ny vorona sy ny endrika soatoavina.
Morphology sy silhouette
Raha jerena ny sary dia toa tsotra be izy io, fa rehefa manidina izy ireo dia tsy dia tsotra loatra, indrindra eo anelanelan'ny fiaramanidina sy ny sidina. Mora azo ny miovaova.
Izy io no lehibe indrindra hatreto, manana elatra 40 - 44cm
maizina daholo (miresaka momba ny varotra iraisana isika)
manana elatra miendrika scythe izy
Ny fiaramanidina iraisana:
vovoka fotsy madio
ny rambony dia tsy manana volom-borona lava lava
elatra lava sy lava
ary indrindra ny rambony misy forked miaraka amin'ny rectrices lava sy manify tariby
Fomba entina manidina
Azontsika atao ny manavaka ireo vorona 3 amin'ny alàlan'ny fanidiny. Saingy amin'ireo fomba rehetra nolazaiko dia heveriko fa ity no sarotra indrindra ho an'ny vao manomboka. Marina fa rehefa nofantarintsika tsara ilay karazany 3. Ny làlan'ny sidina dia ahafahantsika manavaka ny fiaramanidina sy ny sidina, tsy asiako fiakarana ao anaty kitapo satria ireo telo ireo no mora avahana indrindra. Hanana ahiahy foana isika eo amin'ny hoe nahita fiaramanidina na hitelina isika.
Miketrika frantic, elatra mifandimby ary avy eo mitsoraka haingana amin'ny hafainganam-pandeha avo. Ny mijery lalitra haingam-pandeha dia toy ny hoe manidina manidina haingana.
Fiaramanidina lava misy elatra mahitsy ary hafainganam-pandeha miolakolaka
Ny sidina haingana sy mahery miaraka amin'ny tadin'ny elatra voakapa, miaraka amin'ny glides fohy kokoa noho ny fiaramanidina. Toy ny mitsambikina amin'ny rivotra, misidina manidina
Manetsiketsika ao anaty lavaka amin'ny rindrina, rindrina, vatolampy sns. Ka raha mahita ny iray amin'ireto fotaka miforona ao ambanin'ny lavarangana ireto ianao dia azonao antoka fa TSY mandeha haingana izy io.
Ny lanezy dia manao tanimanga amin'ny taniny, mampiavaka azy amin'ny endriny kaopy, misokatra eo an-tampony izy
Raha manao fiaramanidina miendrika boribory boribory boribory miaraka amin'ny lavaka fidirana sy fivoahana tokana ny fiaramanidina
Imbetsaka isika no tsy mahita ireo vorona ireo mandalo fa henontsika mankafy ny rivotra izy ireo. Samy manana ny hirany mampiavaka azy ny tsirairay ary amin'izany dia azontsika atao ny manavaka azy io.
Ny tena tsy manam-paharoa dia ny an'ny haingam-pandeha, izay koa rehefa manidina amin'ny tarika haingam-pandeha izy ireo dia feo manaitra tokoa.
Hiaka, tsy mitombina, mihorakoraka
Carlos W., XC466673. Azo idirana ao amin'ny www.xeno-canto.org/466673.
Mamaly am-pifaliana sy mahavariana a vi»Miverina in-2 izany. Manambara ny fisian'ny saka miaraka a siflitt ary vorona mpihaza miaraka flitt-flitt
Karl-Birger Strann, XC443771. Azo idirana ao amin'ny www.xeno-canto.org/443771.
Hiran'ny fiaramanidina iraisana
Jens Kirkeby, XC381988. Azo idirana ao amin'ny www.xeno-canto.org/381988.
Ny tsy fitoviana hafa
Ny fahasamihafana hafa amin'ireo vorona izay matetika apetratsika ao anaty vondrona iray ihany. Ho hitanao fa vita amin'ny paty hafa ny fiovana
Ny fahalianana iray manintona ny saiko dia ireo mpifindra monina telo izay mifindra monina amin'ny haben'ny haavony.
Niakatra tamin'ny 2000 ambony aho
1 Ara-maso (silhouette sy sidina)
1.1 Morphology sy silhouette
1.2 Fomba entina manidina
2 Amin'ireo akany
3 Amin'ny fihirana
4 Ny tsy fitoviana hafa